November 7, 2021 - Babal Khabar
Nov72021 by बबाल खबरNo Comments
गाउँ घरमा पाइने दूधे झारका यस्ता छन् अद्भूत फाइदा !
हेर्नुस यो भिडियो, अहिले मानिसहरु चिकित्स उपचार पद्धतिमा मात्र भर नपरी आयुर्वेदिक पद्धतिइ पनि अगालिरहेका छन् । किन भने चिकित्सा पद्धतिका धरै साइड इफेट रहेको हुन्छ त्यसैले बजारमा अहिले थुपै जडिबुटी औषधि पाइने गर्दछन।भिडियो आज हामी तपाइलाई हाम्रो वरपर पाइने दुधे झारको बारेमा हामी चर्चा गछौ। जुन झारको प्रयोगबाट थुपै रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। दुधे झार सेतो दुध जस्तो रस निस्कने काण्ड भएको पोथ्रा वर्गमा पर्ने औषधीय गुण भएको वनस्पति हो । यसलाई नेपालीमा दुधे झार, अंग्रेजीमा कमन स्पर्ज भनिन्छ। यसको बिरुवालाई ‘आस्थमा प्लान्ट’ भन्ने गर्दछ। किनकि यो दम रोग (आस्थमा) को घरेलु उपचारमा प्रयोग हुन्छ। उक्त बिरुवामा ट्राइटरपेन, फाइटोस्टेरोल्स्, टानिन्स्, पोलिफेनोल्स्, फ्लाभोन्वाइड्स, इसेसिन्यल आयल, अल्कल्वाइड्स, सापोनिन्स्, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स् (खनिज पदार्थहरु) पाइन्छन्। आस्थमाको चियाले सुख
नुहाउँदा पिसाब छाड्नुहुन्छ? अवस्य पढ्नुहोस यो जानकारी !
हेर्नुस यो भिडियो, मानिसको आ-आफ्नै आनीबानी बारे कुरा गर्ने हो भने सबै मानिसको कुन व्यवहार स्विकार्य र कुन कुरा अस्विकार्य भन्ने आ–आफ्नै धारणा हुन्छ तर एक अज्ञात व्यक्तिले बाथरुममा गरेकाे बानी बारे एउटा सामान्य प्रश्न मात्र उठाइदिँदा पनि ठूलो र गरमागरम विवाद तानिएकाे छ । एकजना सहभागीले केहि समय अघि आफ्ना साथीहरुका घरमा बस्नेबेला आफ्ना मंगेतरले बाथरुममा नुहाउँदै गर्दा पिसाव फेरेको तथ्य बाहिर ल्याएउक्त अनौपचारिक बहशको क्रममा एकजना सहभागीले केहि समय अघि आफ्ना साथीहरुका घरमा बस्नेबेला आफ्ना मंगेतरले बाथरुममा नुहाउँदै गर्दा पिसाव फेरेको तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । ति पुरुषले शुरुमा आफुलाई मंगेतरको कुरा पत्यार नै नलागेको बताएका छन् । अर्काको बाथरुममा त्यसरी पिसा व फेर्नु सही हो ग लत भन्ने सम्बन्धमा मत सर्भेक्षण गर्न आस्क प्रुडन्स नामक अखवारको स्लेटको सल्लाह स्तम्भमा यो प्रश्न पठाए सो बहशमा
पैसा रुपैया दिन्छु ‘न’ग्न तस्बिरको’ भनेपछि युवतीले खिचेर पठाइन यस्तो फोटो जुन हेर्न लाएक छ !
यो भिडियो हेर्नुस, काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बिनाको जीवन अहिले निकै निरस हुन्छ । मानिसहरु सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर घण्टौं विताउन सक्छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने कुराकानी प्रत्यक्ष भेटाघाटका क्रममा गर्न नसकिने पनि हुन्छन् । त्यसको एक उदाहरण अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत साथी बनेकाहरुले महिलासंग गर्ने ब्यवहार र कुराकानी निकै उदेक लाग्दो हुन्छ । पुरुषहरु महिलासंग गर्ने ब्यवहार नै फरक हुन्छ । हालै सामाजिक सञ्जालमा एउटा त्यस्तै म्याजेस भाइरल भइरहेको छ । एक महिलालाई पुरुषले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राखेको प्रस्ताव उनले सार्वजनिक गरिदिएपछि त्यो म्यासेज अहिले भाइरल भइरहेको छ । पुरुषहरुले महिलालाई इन्बक्समा लेख्ने म्यासेजको उदाहरण हो । ‘शो बु’ब्स । सेन्ड न्यू’ड्स । गिभ से’क्स ।’ यस्ता कुरा पक्कै पनि कुनै पुरुषले महिलालाई पहिलो पटक भेटे
हेर्नुुस यो भिडियो, आफ्नै लागि र नेपाल आमाको लागी मुटुभरि देशको मायॉ अनेकौं सपना र भविष्यका परिकल्पना गर्दै मुटु पिरो वनाउंदै त्रिभूवन विमानस्थलवाट वैदेशिक यात्रा सुरु गरेको पनि १ वर्ष पुगेछ। सबैभन्दा महंगो र हतारै हतारको सहर मानिने टोकियोको एक कुनामा वसेर जिन्दगिका संघर्षसिल पाईलाहरुले गन्तब्य खोजिरहेकि छु।यो सहरमा म जस्ता सत्तरि हजार बढि नेपालिहरु यसैगरि भौतारिईरहेका छन। यस सहरमा सुरुवातका दिनहरु निकै कष्ठपुर्ण र कहालिलाग्दा थिए।आफ्नो भन्ने कोहि थिएन, एक त सबै हतारै हतारमा देखिन्थे भएका आफन्ति र साथिभाईले पनि खासै वास्ता नगरेजस्तो लाग्थ्यो। दुख लागेको कुरा म भन्दा केहि समय पहिला जापान प्रवेश गर्नुभएका आफन्तजनहरु समयसंगै वदलिएर आफन्त चिन्नै छोड्नुभएछ।अझै भनौं नेपाल छंदा छिटो आउ काम लगाईदिन्छु भन्नेहरुले पनि फोन उठाईदिएनन।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** सुनेको जापान र
हेर्नुस यो भिडियो, महानगरीय प्रहरीले काठमाडौंमा अव्यवस्थित रूपमा खोलिएका केही क्याबिन रेस्टुराँ, मसाज र डान्स बारबाट यौ’नज’न्य गतिविधिमा सं’लग्न भएको आरोपमा ४० जना महिलालाई पक्राउ गरेको रहेछ। तीमध्ये ३५ जना विभिन्न उमेरसमूहका महिलालाई हनुमानढोका प्रहरीले पुनस्स्थापनाका लागि रक्षा नेपालमा पठाएको थियो। उनीहरूलाई बुझी संस्थाको सेल्टरमा ल्याउन म आफैं गएकी थिएँ। उनीहरूलाई ल्याएपछि एकरएकजनासँग गो’प्य कुराकानी भयो मेरो। तीमध्ये अधिकांशको आआफ्नै दुस्ख थियो, द’र्द थियो। सबै चिन्तित अनुहारमा थिए। उनीहरू भन्दै थिए, ‘वैकल्पिक बाटो भइदिए हामी तुरुन्तै यो पेसा परिवर्तन गर्न तयार छौं।’ तर एउटी अन्दाजी ४० देखि ४५ वर्षकी लाग्ने महिलाको कुराकानी, उनको हाउभाउ र बोल्ने शैली बेग्लै थियो। कुरा गर्ने पालो आएदेखि नै उनी मुख खु’म्च्याउँदै बोल्दै थिइन्। उनको भित्री कुरा सुन्दा म पनि छक्क परेँ। उनले म
यो भिडियो हेर्नुस, खाबी लेम टिकटकमा सबैभन्दा चर्चित व्यक्तिको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । अमेरिकी नृत्याङ्गना चार्ली डी’अमेलियोपछि टिकटक प्रख्यातीको दोस्रो स्थानमा लेमको नाम दर्ता भएको छ । उनको टिकटक खातालाई ९० करोडभन्दा बढी व्यक्तिले फलो गर्छन् र त्यसमा उनले एक अर्ब ३० करोड लाइक पाएका छन् । कैयौ व्यक्तिहरुले लेमले अमेलियोलाई पनि उछिन्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । अमेलियो टिकटकमा एक अर्ब फलोअर पुर्‍याउने पहिलो व्यक्ति हुन । अहिले उनको एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी फलोअर छन् । खाबी लेम पश्चिम अफ्रिकाको सेनगलमा जन्मिएका हुन् । २१ वर्षीय लेमको अहिले इटलीमा बसाबास रहेको छ । एक कारखानामा मजदुरका रूपमा काम गर्ने लेमले कोभिड¬ १९ महामारीका कारण जागिर गुमाएपछि मार्च २०२० मा टिकटक चलाउन सुरु गरेका थिए। लेमले अन्य मानिसले गरेको कुनै कार्यलाई तुलना गर्दै यस कार्यलाई कसरी सहजै गराउने भन
हेर्नुस यो भिडियो, बलिउड अभिनेत्री सारा अली खान आफ्नो बिन्दास व्यवहारका लागि परिचित छिन् । सोसल मिडियामा उनी निकै सक्रिय हुन्छिन् र आफ्नो सुन्दर तस्बिर सेयर गरिरहन्छिन् । सारा कुनै पनि मुद्दामा खुलेर आफ्नो विचार राख्छिन् । यहाँसम्म कि उनले आफ्ना आमाबुवा र दुईबीचको स’म्बन्धवि’च्छेदबारे पनि खुलेर कुरा गरिसकेकी छिन् । सैफसँग छुट्टिएपछि अमृताले नै दुबै बच्चा हुर्काउने काम गरिन् । त्यसैकारण सारा आफ्नी आमासँग निकै नजिक छिन् । आमाबुवालाई खराब ठान्थिन् सारा अली खानः हालै उनले अर्को एउटा खुलासा गरिन् जसमा उनले बाल्यकालमा आफ्ना आमाबुवाबारे के सोच्थिन् त्यसबारे जानकारी दिएकी छिन् । वास्तवमा सारा अली खानलाई लाग्थ्यो कि उनका पिता सैफ अली खानलाई लाग्थ्यो कि उनका पिता सैफ अली खान गा’ली मात्रै गर्छन् र आमा अमृता एउटा पो’र्न सा’इट चलाउँछिन् । उनलाई लाग्थ्यो कि सैफ र अमृत वास्तविक जीवनमा असाध
यी छोराले सम्बन्धविच्छेद भएकी आमाको बिहे गराउने, कारण थाहा पाउँदा तपाई पनि खुसी हुनुहुनेछ !
हेर्नुस भिडियो, संसारमा सबैले भगवान पाउँदैनन् त्यसैले सबैले आमाको रुपले भगवान पाउँछन्। एउटी आमाको कुरा गर्नुहोस्, उनी आफ्ना सन्तानको लागि आफ्नो खुसी राखेर बाँच्छन्। सन्तानको सुख नै उनको लागि सबैथोक हो। छोराछोरीका लागि आफ्नो सारा जीवन त्याग गरिदिने आमाको मुखबाट कहिल्यै केही निस्कँदैन। एकल आमाहरूले सबैभन्दा बढी त्याग गर्छन्, हो उनीहरू आफ्ना बच्चाहरूको लागि मात्र एक्लै बस्छन् र आफ्ना बच्चाहरूको लागि आफ्नो जीवन त्याग गर्छन्। तर आज हामी तपाईलाई एउटी आमाको बारेमा बताउनेछौं जसले आफ्नो जीवनको २३ वर्ष आफ्नो छोरालाई हुर्काउन बिताए तर छोराले आफैंले केही गर्न सक्ने उमेरको त्यो चरणमा पुगेपछि आमाको लागि यस्तो गर्‍यो थाहा पाउनुहोस् ,तपाईं खुसीले पागल हुनुहुनेछ। पछिल्लो समय एक पाकिस्तानी केटा सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेका छन् । र यसको कारण उनको आमा हो। वास्तवमा उनले आफ्नी आमाको लागि य
श्रीमतीलाई लाग्यो कि श्रीमान बाहिर मौज-मस्ती गर्दैछन्, त्यसपछि एक रात यस्तो देखे कि आफैलाई लाज लाग्न थाल्यो ।
हेर्नुस यो भिडियो, अक्सर महिलाहरु आफ्नो पतिको बारेमा चिन्तित हुन्छन् कि उसले अरु कसैसँग सम्बन्ध जोडेर छोड्छ। कतिपय महिलाले आफ्ना श्रीमान् राति अबेर घर आएमा ठगी गरेको गुनासो पनि गर्छन् । यस्ता केही प्रश्न महिलाको मनमा पनि उठ्छन् कि श्रीमान् किन काममा यति व्यस्त छन्, परिवारलाई समय दिइरहेका छैनन् ? यस्तै समस्यासँग संघर्ष गरिरहेकी एक महिला जोआना मिलरले आफ्नो ब्लगमा आफ्नो एउटा कथा लेखेकी छिन्, जसमा उनले आफ्नो श्रीमान् राति अबेरसम्म घर नफर्केपछि कसरी आफ्नो भ्रम मेटियो भन्ने कुरा बताएकी छिन् । श्रीमान् बाहिर रमाइलो गरिरहेको श्रीमतीलाई लाग्यो, श्रीमतीले आफूलाई भएको सबै कुरा बताइन्, जुन हामी छोटो समयमा बताउन गइरहेका छौँ । श्रीमतीलाई लाग्यो कि श्रीमान बाहिर मौज-मस्ती गर्दैछन् यो कथा जोआना मिलर नामकी महिलाको हो, जुन उनले आफ्नो ब्लगमा सेयर गरेकी छिन् । श्रीमान् बाहेक उनकी छोरी पनि जोनाक
हेर्नुहोस यो भिडियो, आमा हुनु भनेको हरेक केटीले बाँच्न चाहने अनुभूति हो। कसैलाई नयाँ जन्म दिएर संसारमा ल्याउने अनुभूति आफैमा विशेष हुन्छ। गर्भवती हुँदा महिलाले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । किनकी उसको साथमा उसको पेटमा सानो जीवन बढ्दै गएको छ । यो संसारमा जो आउनु पर्छ। ९ महिना पेटमा सानो जिवन राखेर जन्म दिनु यस्तो अनुभूति हो जुन आफैले महसुस गरेकोले मात्र बुझ्न सक्छ । तर के हुन्छ यदि तपाईलाई थाहा छैन कि तपाई भित्र सानो जीवन बढ्दैछ भनेर । यो कसरी हुन सक्छ भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। तर हामी तपाईलाई आमा बनेकी एउटी केटीको बारेमा बताउनेछौं, तर त्योभन्दा पनि अचम्मको कुरा के छ भने, उनको नौ महिनासम्म महिनावा'री नै छुटेको छैन, न त पेट नै निस्कि'एको छ, न त यस्तो अनुभूति गराउन सक्ने कुनै कुरा भएको छ की उनी आमा बन्न लागेकी छन्। यो ओ'ल्डहाम, ग्रेटर म्या'नचेस्टरको इबोनी स्टीभेन्सनको कथा ह